पछिल्लो पुस्ताका चर्चित युवा गायक नितेशका साथ दोङदेमूनमा सउलमाण्डु नाइट, मे २६ तारिख :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
पछिल्लो पुस्ताका चर्चित युवा गायक नितेशका साथ दोङदेमूनमा सउलमाण्डु नाइट, मे २६ तारिख
युट्यूब इन्टटेनर तथा युवा गायक नितेश जंग कुँवर कोरिया आउने भएका छन् । नेप्ज पार्टी रकर्स कोरियाले मे २६ तारिख राजधानी सउलमा आयोजना गरेको सउलमाण्डु नाइटमा आफ्नो सांगेतिक प्रस्तुति दिन कुँवर कोरिया आउन लागेका हुन् । पछिल्लो युवा पुस्तामा विशेष गरी चर्चामा रहेका कुँवरले हाम्रो नेपालमा, फ्लर्टी माया, पिडित, गेडै जस्तो जिन्दगी लगायत दर्जनौ चर्चित गित पस्कने छन् । आफ्नो युट्यूब च्यानलबाट चर्चा र आम्दानी गरेर युवाहरुको प्रेरणादायि बनेका कँुवरले आफ्ना धेरै जसो गीतमा नेपालीपन र लोकलपनलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेका छन् । जसका कारण उनको गित चर्चित र युट्यूबमा बढि सस्क्राइब हुने गरेका छन् ।
मनोरञ्जनात्मक सांगेतिक कार्यक्रम छुसक र सलनालमा हुने गरे पनि त्यसलाई ब्रेक गर्दै नेप्ज पार्टी रकर्सले कोरियामा रहेका युवायुवतीको माग अनुरुप गायक कुँवरलाई कोरिया आमन्त्रण गरेको हो । नेपाली सांगेतिक क्षेत्रमा एउटा छुट्टै र विशेष पहिचान बनाएर युवाका प्रेरणा श्रोत बनेका गायक कुँवरलाई कोरिया आमन्त्रण गर्नु नै राम्रो अवसर भएको आयोजकले बताएको छ । कुँवरले अष्ट्रेलिया लगायत युरोपेली मुलुकमा आफ्नो सांगेतिक प्रस्तुति दिइसकेका छन् । ओम विक्रमको चर्चित सिन्धुली गढिको गितलाई पनि नयाँ भर्सन दिएका छन् ।
गायक नितेश जंग कुँवरले प्रस्तुति दिने सउलमाण्डु नाइट मे २६ तारिख सउलको दोङ्देमूनस्थित न्यू छङ्जी होटलको डान्स हलमा आयोजना हुने भएको छ । त्यसका लागि आयोजकले तयारी गरिरहेको छ । सउलमाण्डु नाइट NPRIK समुहले नेतृत्व गर्दै ब्रदर्सहरुको विशेष सहयोगमा आयोजना गर्न लागिएको हो । कार्यक्रममा नितेश संग संगै कोरियाका प्रतिभा युवा गायक दावा लामाको पनि विशेष प्रस्तुति रहनेछ भने डिजे सिम्यानले दर्शकहरुलाई बिहान अवेर सम्म नचाउने छन् ।
Seoulmandu - Night
May . 26 . Saturday
New Cheonji Hotel Dongdaemun Seoul
प्रकाशित मिति : २०७५ वैशाख २९ (May 12, 2018)